Ungayibopha njani iminqwazi yabasetyhini ebusika ngeenaliti zokujija? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayibopha njani i-hat yabasetyhini ebusika ngeenaliti zokuqhaqha?
Ngoku ukufumana indlela yokugoba into akuyongxaki. Into yokuqala oyifunayo kukuthatha isigqibo kwimodeli oyithandayo. Thenga izixhobo ezifanelekileyo kunye nemicu. Uya kudinga iinaliti zokujikeleza ngeenaliti okanye i-hosiery. Kwaye ufumane ukusebenza. Apha unokufumana umnqwazi oza kukukholisa kwaye uziqhelanise nobuchule bokubopha.
Ukuxhoma umnqwazi wasebusika ngeenaliti zokuqhawula akunzima. Kwanele ukuthenga i-skeins ezi-1-2 zemisonto, thatha iinaliti zokucheba ngokungqinelana nemiyalelo yoboya obuthengiweyo kwaye uqalise ukusebenza ngokwenkqubo. Izikimu zeminqwazi yabasetyhini kunye neyamadoda ebusika, bona ngezantsi:
Olu luhlu olulula lwamakhosikazi entloko lubotshwe ngolu hlobo lulandelayo:
Uya kudinga umsonto woboya bendalo kunye nokongezwa kwe-acrylic, ubukhulu beentunja zenaliti.
Siqala ukugoba ngephethini.
Sisusa ilogo yokuqala kumqolo wokuqala kwaye musa ukugoba.
Kuya kufuneka uyiphindaphinde i-crochet ngexesha elinye.
Okulandelayo, siya kuqhina loop njengephambili.
Ke kufuneka ugobe wonke umqolo wokuqala.
Okulandelayo, qala umqolo wesibini:
sixhume ilogo yokuqala njengeyona engalunganga, emva koko sadibanisa umsonto kunye nomtya ongaphambili.
Yonke eminye imiqolo iya kudityaniswa njengomqolo wesibini. Sanamathela kubude obufunekayo.
Emva koko siqala ukujikeleza.
Ukwenza oku, kwimiqolo yangaphambili siye saqhawula ii-loops ezininzi.
Kuqala sikwenza oku qho emva kwemilo ilishumi, emva koko isibhozo, emva koko isithandathu, de ufikelele eqongeni. Siyenza ukusuka kwicala elingalunganga.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuhombisa isigqoko:
yenza umlinganiso woxolo
Kule ngxaki, ndaguqukela kumama, kuba uyinkosi kulo mbandela, ukuqhina umnqwazi wabasetyhini ebusika kunzima kakhulu, kodwa ukuba ubukele le vidiyo ngononophelo, ungamelana ngokulula nomsebenzi, jonga!
Nantsi ividiyo elungileyo yokufunda indlela yokuqhoboshela umnqwazi wabasetyhini ebusika
Nalu ulwazi oluvela kule vidiyo:
Siqokelela iilogo ezili-100 kwaye siqhawule intambo yesi-2 * 2 cm ububanzi
Sincamathele iphethini ephambili kunye nebhendi ye-elastiki yamaNgesi 25-30 cm
Iip loops eziphezulu kufuneka zibekho kwicala elingalunganga.
Umqolo omnye sinciphisa ama-2 kunye ngobuso kudonga olungasemva
kumqolo olandelayo sinciphisa i-2 ngokudibeneyo.
Okulandelayo, saqhawula eminye imiqolo emi-6 (kwicala elingaphambili - ngaphambili, kwicala elingalunganga - icala elingalunganga)
Qinisa isithsaba kwaye uthuke umthungo wangasemva
Senza i-bubo kwaye siyithunga isithsaba.
Ndiyathemba ukuba uyakwazi ukubopha iminqwazi yakho yasebusika wena okanye omnye umntu.
Nantsi enye ividiyo malunga nendlela yokubopha isigqoko (umnqwazi) ngeenaliti zokuqhawula umntu omdala
Kukho iindlela ezininzi ezimangalisayo zokufaka umnqwazi wabasetyhini ebusika. Okokuqala, kufuneka uthathe isigqibo malunga nobunzima. Ukuba usaqala, khetha iphethini ngendlela elula. Ukuba uchwephesha, ke ungakhetha naluphi na ukhetho. Ndicebisa ukuba uzame oku:
Jonga apha ezinye izinto ezininzi ongazikhetha zokunxiba iihempe ezintle zasebusika zabasetyhini.
Ukunxiba iminqwazi ngenaliti kuyayila, umntu ngamnye kwaye uyifashoni. Ukuze ukwazi ukugoba umnqwazi, kufuneka wazi izigaba ezisisiseko zokuqhina, ukwazi ukutsala iilogo, ugobe umphambili nangasemva, uqonde iipateni zokujija. Emva koko kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngowuphi umnqwazi ofuna ukuwutsala, ngowuphi umbala, ngowuphi umsonto, kweyiphi indlela yokubopha, nokuba iya kuba nobucwebe, thenga izinto eziyimfuneko.
Ukukhetha ukhetho kunye neepateni kunokufumaneka apha, apha kunye nalapha.
Ukubopha umnqwazi ngeenaliti zokuqhawula kulula. Zininzi iindibano zocweyo, kubandakanywa neziqwengana zokuqalisa. Into ephambili kukulandela ngokungqongqo imiyalelo, ukhetha iinaliti ezifanelekileyo zokujija kunye nomsonto, kungenjalo loo mveliso inokuvela ibe nkulu okanye incinci ngokobukhulu kunokuba bekucwangcisiwe. Ngokwam le modeli ndiyifumene inomdla kwiindidi ezininzi zobuso - ithatha:
Ukudibanisa umnqwazi wasebusika kunye nephethini, ukuba unamava kulo mbandela, ungayenza ngeenaliti ezintlanu zokudibanisa, ukwenza njani oku, unokufumana ngokubukela le vidiyo:
Ungayibopha kanjani iminqwazi yasebusika ngemfashini ngezandla zakho, kunye nezikimu onokuzibona apha
Kwabaqalayo, ungadibanisa umnqwazi kunye nepompom:
Iinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela ehambelana ngayo zingafumaneka apha.
Indlela yokugoba umnqwazi wabasetyhini? Ndinikezela ukhetho olulula kakhulu, kodwa ndiyithanda kakhulu imodeli yesigqoko sowesifazane.
Nantsi inkcazo yokuqhawulwa kwale modeli ye-hat.
Ukuba olu lwazi alwanelanga, ke ungaqhagamshelana apha ngeenkcukacha.
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,399.